Home Wararka Ahlu Sunna oo Qorsheynaya inay Guud ahaan la Wareegaan Gacan ku Haynta...
Ahlu Sunna oo Qorsheynaya inay Guud ahaan la Wareegaan Gacan ku Haynta Galmudug.
Wadaadada Ahlu Sunna Waljamaaca oo ay hogaamiyaan Sheekh Shakir iyo Sheekh Maxamuud Macalin Xasan ayaa goordhow la wareegtay gacan ku haynta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, sida ay sheegayaan la hubo.
Sida aan xogta ku helnay, la-wareegista ayaa ku timid gadood ay sameeyeen shacabka ku nool magaalada, iyo taliye ku xigeenka booliska degmada Mataban Cabdullahi Aadan, oo isaga iyo ciidan uu wato ay ku biireen dhanka Ahlu-Sunna, taas oo keentay magaalada ay gacanta u gasho.
Inkasta oo Matabaan ay ka tirsan tahay Hiiraan iyo maamulka HirShabeelle, haddana shacabka ku nool magaalada badankood ayey is xigaan hoggaanka sare ee kooxda Ahlu-Sunna, oo ay si weyn u taageeraan.
Arrimahaan waxay yimaadeen kadib markii MW Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Qoorqoor dayacay masuuliyaddii saarneyd kuna mashquulay inuu Faramajo hoos fadhiyo.
Waxaa la soo gaaray xelligii ay iska dulqaadi lahaayeen Qoorqoor oo uu Faramjo u sii raaci lahaa. Qoorqoor ma dhibaateyn Galmudug oo kaliya ee qaranka oo dhan ayuu codkiisa iyo hawshiisa ku dhibaateeyey oo haddii uu hawshiisa Galmudug ku ekaan lahaa kana soo bixi lahaa maanta dalka waxaa uu haysan lahaa dowlad dhameystiran oo aysan wadaadadu handadi kari lahayn.